Penyai epamba downlight hanya vanhu upenyu ose uye siyana munyika. Fire yavose sezvavakatarirwa downlight anoita mupenyu akachengeteka. Kuteura uye shanduka danda angled kuisa downlight kupa pfungwa chiedza kune zvakanaka. IP65 downlight anogona kudzivirira mvura uye yakakwirira mwando kupinda. High RA uye CRI kuti mupenyu wako chaiye. Low kudzvokora chiedza kunoita chiedza hutano. Anonzwisisa mutengo uye nyore wiring kuti tsamba yako zvishoma.
Penyai vezvokutengeserana downlight inowira neeSultan maviri kusangana zvakasiyana kumusika zvinodiwa - the bhajeti uye Premier. Fittings ava designable yaitsiva CFL uye PL chiedza. Nokuda chiedza nguva uye nzvimbo inokosha refu kushandiswa, Penyai yezvokutengeserana downlight anopa 5 makore garandi uye kupa zvakawanda shanduka basa zvokusarudza mune imwe rambi. Uyewo akasiyana optic Ipfungwa chatingapiwa User sarudzo chiedza mamiriro zvakagadzirwa zhinji.
Penyai akangwara downlight rinodzorwa Via APP vachishandisa Makaralı rwokugadzira. Kuderedza vanhu zvaimunetsa pamusoro zvakavaomera kuzvidzora kana runhare asipo, tine rusvingo chinja anoenderana. Noungwaru zvigadzirwa runoita yedu akangwara downlight yakawanda enderana vamwe hurongwa. Kunze kudzorwa, asi simba kushanda rambi chisikwa. It ane chiedza chikuru uye denderedzwa rechiedza chiedza muna chena uye RGB iri rakakodzera nokuti mafomu zvakasiyana. With Penyai akangwara downlight, unogona kuita mwenje suit manzwiro ako chero nguva uye chero kupi panguva Kumubata foni.
Our Penyai Lighting nyanzvi kugadzira uye ouinjiniya zvikwata zvinogona kusika customized zvinogadzirwa kuti vakwanise vatengi kusiyanisa kubva vakwikwidzi pazvinangwa kunonyanyisa anokoshesa misika yavo. Our multi-lingual vatengi mamaneja basa kuti zvakarurama kunzwisisa zvinodiwa vatengi zvose uye zvinopa indasitiri vaitungamirira mitemo basa kare, panguva uye pashure zvibvumirano zvakazara.